Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya oo dib loo furay kadib dayactir ballaaran oo lagu sameeyay – SomaliaOne News Network
Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya oo dib loo furay kadib dayactir ballaaran oo lagu sameeyay
Oct 27, 2016 Tajuddin GANACSIGA 0 1337 Views By Tajuddin
Dib u furidda dhismaha Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya oo la dayactiray.
Muqdisho, Soomaaliya (SOMALIAONE.NET) – Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray Wasaaradda Maaliyadda oo in muddo ah dhismo ku socday, waxaana xaflada ka soo qayb galay, Wasiiro, Xildhibaano, Taliyeyaasha Ciidamada, Agaasimayeyaasha guud ee Wasaaradaha, iyo Shaqaallaha Wasaaradda Maaliyadda.
“Waxaana niyada gashtay in Wasaaradda Maaliyadda aan dib u dhiso inta aan xafiiska joogo si shacabka loogu fududeeyo adeegyada ay uga baahan yihiin Wasaaradda oo hadda madaxtooyada oo si KMG ah ugu shaqeeyso. Waxaa xusid mudan in aan haysanay lacag laba milyan oo doolar ah, oo ay dowladda Sweden noogu deeqday, waxayna soo jeediyeen shirkado shisheeya ah in la dumiyo dhismahaan, waxaanse go’aan ku gaarnay in Wasaaradda ay bixiso lacagta lagu dayactirayo dhismahaan halkii laga dumin lahaa, lacagta kalana waxaan ku dhisamaheeda ku bilaabaynaa bisha soo socota Wasaaradda Lacagta” Ayuu yiri Wasiirku .
“Waxaa faraxad weyn ah in maanta si xowli ah dalka dib u soo kabanayo, waana meeshii labaad oo aan maanta furo. Afar sano ka hor waxaan ballan qaadnay in lagu samaynayo dib u habayn maamulka maaliyadda dalka, waana ku faraxsanahay meesha ay maanta waxa marayaan, waxaana maanta howl galay dhamaman hay’adihii dowladda, isla markaana wada shaqayn buuxdana leh” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in la hirgeliyey nidaam lagu agaan karo dhaqdhaqaaqa maaliyadda ”Waxaa lagu tallaabsaday nidaam electronic ah oo aan waxba laga khaldi karin, dhaq dhaqaaq maaliyadeed oo kastana la ogaan karo sida uu u dhacay iyo cida samaysay. Waxaa meesha laga saaray lacagtii cadaanka ahaa ee la isticmaali jiray, Wasaaradda Gashaandhiga iyo tan maaliyadda oo is kaashanaya ayaa ku howlan in ciidanka loo sameeyo nidaam ay mushaarka ku qaataan”.
Wasaaradda Maaliyadda ayaa ka kooban 86 qol waxaana dayactirkeedu socday muddo hal sano ah. Wasaaradda ayaa uga fa’iidaysanaysa in shaqaalaha ay helaan xafiisyo ay ku shaqeeyaan, waxaana dadka shacabka u fududaynaysaa in ay adeegyadooda si sahlan ugu yimaadaan wasaaradda.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Wasaaradda Maaliyadda
Wadada Wadnaha ee Caasimadda Muqdisho oo dib loo furay kadib dayactir ballaaran oo lagu sameeyay Two Eritrean pilots defect to Ethiopia with jets: Opposition group
Wasaaradda Dastuurka iyo Dowlad...
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed...
Sacuudiga oo xoolo badan ka dhoofsanaya...
Addis Ababa, Ethiopia (AP + SOMALIAONE.NET) — Two Eritrean pilots have defected with their fighter jets to neighboring Ethiopia, an...